Japan's Prime Minister Shinzo Abe calls it quits | Government Affairs
Ikhaya » Iindaba ZikaRhulumente noRhulumente » Inkulumbuso yaseJapan uShinzo Abe uyibiza ngokuba iyayeka
Inkulumbuso yaseJapan uShinzo Abe uyibiza ngokuba iyayeka
Inkulumbuso yaseJapan uShinzo Abe ubhengeze ukuba uyehla esikhundleni. Isibhengezo sifike emva kweeyure nje emva kokuba wazise umbutho wakhe olawulayo ukuba unengxaki yezempilo.
UShinzo Abe, obekhokele iJapan iminyaka esibhozo ilandelelana, uthe woyika ukuba esi sifo siza kuchaphazela izigqibo zakhe. "Andizokwazi ukwenza izigwebo ezifanelekileyo ngenxa yokugula," inkulumbuso ephumayo icacisile, ichaza ngesigqibo sayo kwangoko ngemini.
U-Abe unengxaki yokufumana isifo se-ulcerative colitis, isifo esinganyangekiyo esidumbisayo, iminyaka emininzi. Inkulumbuso uqobo iveze ukuba imeko yakhe iqale ukuba mandundu phakathi kwinyanga ephelileyo, inokuba ibangele ukuba acinge ngokuyeka isikhundla.
Ukuqhubela phambili, u-Abe waxolisa "ngokusuka entliziyweni yam" ukuya kubantu belizwe lakhe, esongeza ukuba akafuni ukurhoxa kwakhe kubangele ingxaki kwezopolitiko zaseJapan. Ngamehlo akhe efumana inkungu, inkulumbuso yathi ngoku kuxhomekeke kumaJapan ukuba agwebe ilifa lakhe.